कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिमा सामान्य असर, आफैं निको हुने - HimalDarpan
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिमा सामान्य असर, आफैं निको हुने
कोभिड–१९ विरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोप लगाउँदा सामान्य असर देखिएको छ। केही व्यक्तिमा देखिएकाे सामान्य असर आफै निको भएर जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले खोप लगाएपछि व्यक्तिमा खोपले सामान्य असर देखिएको बताए। केही व्यक्तिमा देखिएको असर केही समयपश्चात् आफैँ हराएर जाने गरेको उनले बताए।
खोप लगाएको ठाउँ रातो हुने, सुन्निने, चिलाउने, टाउको दुख्ने, जस्ता सामान्य असर देखिएको छ। “आजसम्म खोप लगाएका व्यक्तिमा सामान्य असर देखिएको छन्। ती सबै व्यक्तिमा देखिएका असर केही समयपश्चात् आफैँ निको भएको छ,” डा. अधिकारीले भने, “खोपले काम गर्न थालेपछि त्यस्ता सामान्य असर देखिने गर्दछ। त्यस्तो असर कसैलाई दुई–तीन घन्टामा निको त कसैलाई एक–दुई दिनमा निको हुन्छन।”
अहिलेसम्म कसैलाई पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या भने नआएको उनले बताए। मन्त्रालयले खोप लगाउँदा हरेक अस्पतालका सम्भाव्य घटनाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक टिम तथा औषधिको व्यवस्थापनसमेत गरेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले खोपपश्चात् अवाञ्छिन घटनाको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि देशभरि नै विज्ञ टोली परिचालन गरिएको बताए। मन्त्रालयले सबैलाई ढुक्क भएर खोप लगाउन अनुरोधसमेत गरेको छ।
यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले १० जनामध्ये एक जनामा सामान्य समस्या देखिएको बताए। उनले खोप लगाएको ठाउँ दुख्ने, सुन्निने, शरीर थाकेको जस्तो हुने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, जाडो लाग्ने जस्तो समस्या देखिएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभरी १६९ खोप केन्द्रबाट ४६ हजार १९७ जनाले खोप लगाएका छन्। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको १० लाख खोप १४ माघदेखि लगाउन थालिएको हो।
बुन्डेसलिगा: स्टटगर्टमाथि बायर्न म्युनिखको फराकिलो जित,लेवान्डोस्कीको ह्याट्रिक
विरोधपछि अक्षय कुमार अभिनित चलचित्रको नाम ‘लक्ष्मी बम’बाट ‘लक्ष्मी’ राखियो…
रोनाल्डो पछि मेस्सी बने फूटबल जगतका दोस्रो अर्बपति…
प्रिमियर लिग: लिड्स युनाइटेडमाथि टोटनह्यामको ३-० गोलको सहज जित…